Izindaba - uchungechunge lwe-Y81 isingeniso sekhompiyutha yensimbi
Yiziphi izinhlobo eziyinhloko zamabhali ensimbi angcolile emakethe?
Kunezinhlobo ezintathu eziyinhloko ezivamile, okungukuthi, i-Vertical manual packer, i-Horizontal manual packer, i-Horizontal automatic packer.
Ungayithenga kanjani i-waste metal compactor esiteshini sokupakisha?
Ivolumu uqobo, okungukuthi, cabangela usayizi wesayithi, umthamo wokuthunyelwa, indlela yokusebenza, njll. Inzuzo ikakhulukazi incike kumthamo, Ngesikhathi esifanayo, ukulawula izindleko kubaluleke kakhulu, okuzokhulula isikhala senzuzo eyengeziwe kuwe. Isibonelo, umpakishi mncane kakhulu ukuthi angaqedela umsebenzi wokupakisha, Uma mkhulu kakhulu, uzokhuphula izindleko futhi abangele ukumoshwa kwezinsiza. Ukuze ungaphazamisi umsebenzi we-packer, ukusetshenziswa kwemishini kanye nokugcinwa okungcono kwe-baler yensimbi, Lapho ufaka i-baler yensimbi, ngaphezu kokunaka ezinye izingxenye zemishini efakwe yi-packer, kunezindaba ezithile ngokuvamile ukuzitshwa isifaki.
Yini okufanele ngiyinake ngaphambi nangemva kokuthenga umshini wensimbi we-Y81?
Ngaphambi nangemva kokuthenga i- insimbi yensimbi, omunye wemisebenzi okufanele wenziwe ukuklama indawo yokufaka. Kufanele siqonde ubukhulu bemodeli ekhethiwe yemishini kanye nobubanzi besayithi elidingekayo ngemva kokufakwa.
Ungafaki ibhali yensimbi endaweni engavundlile. Faka ibhali yensimbi endizeni efanayo evundlile. Thatha indiza njengereferensi, beka ileveli endizeni yereferensi, futhi ulungise izinyawo eziyisithupha zomshini wokulungisa wompakishi ngokuvundlile.
Ingabe kungcono ukuthenga ibhali yensimbi eseceleni noma entsha?
Nakuba imishini yamasekeni ishibhile, amanani asukela ku-8000USD kuya ku-15000 USD, iningi lawo linezinga eliphezulu lokuhluleka. Ngaphandle uma ungumthengi embonini, usanconywa ukuthi uthenge imishini emisha.
Yiziphi izimo zokusebenza kahle kwebhali yensimbi?
Isici esiqondile kakhulu esithinta ukusebenza kahle kokukhiqiza kwe i-waste metal baler iyimodeli kanye nokucaciswa kwebhali. Ukusebenza kahle kokukhiqizwa kwebhali yensimbi evamile kuphakeme kunaleyo yensimbi enomnyango endaweni yokukhipha impahla.
Ngakho-ke, kunconywa ukuba unake izimo ezingenhla njengereferensi lapho uthenga i-baler yensimbi.
I-Scrap Metal Compactor, I-Cardboard Baler eyenziwe ekhaya, I-Y81 Hydraulic Baler, Umshini we-Aluminium Foil Baler, I-Leaf Compactor kanye ne-Baler, I-Pop-Top Can Baler Equipment,